> Resource > DVD > Panasonic DVD gubi: Sida loo Guba Panasonic Video inay DVD
Ma doonaysaa in ay gubaan cajalado camera Panasonic in DVD laakiin ma ka heli kartaa DVD gubi ku habboon? Halkan, waan ku sujuudayaa talinaynaa Wondershare DVD abuura . Waxay noqon doonaa mid caawisa oo weyn si loogu badalo aad Panasonic videos in dhamaan noocyada camera in DVDs la tayo wanaagsan leh iyo xawaaraha si dhakhso ah aalladda. Sidaa awgeed, waxaad iyaga dhawri karaa waqti dheer inay yimaadaan oo ay u daawado ee DVD wax ciyaaryahan si joogto ah la leh qoyskaaga ama saaxiibadaa.
Ka dib marka aad u doorato, waxaad ka heli doontaa waxa ay dhab ahaantii way fududahay in la abuuro qaab DVD iyo DVD disc ka Panasonic videos. Iyo samaynta bedeley DVD shakhsi, ubaxuna wuu wax macno leh, watermark xiiso leh ma aha wax adag. Haddii aad sidoo kale doonayaa in lagu daro sawirada qaar ka mid ah si ay u abuuraan slideshow ah, ma laga yaabaa inuu si fudud ula software this DVD gubashadii xirfadeed. Just leeyihiin isku day ah! Download barnaamijka oo raac dhabar jab ku hago. Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan la qaato Wondershare DVD Creator u Mac ay gubaan cajalado Panasonic in DVD ee Mac OS X (Mountain Libaaxa ka mid ah). Tallaabooyinka waa isku mid, kaliya hubiso in aad hesho version saxda ah.
1 Load Panasonic il videos
Sida wax ku ool ah oo si sahlan loo isticmaali gubi Panasonic, waxaad ka heli doontaa waxa aad u saaxiibtinimo si ay u isticmaalaan, iyo tan iyo tallaabada ugu horraysa. Waxaad ku dari kartaa Panasonic video clips iyo sawiro si toos ah barnaamijka ay soo jiitaa-n-dhibic. Haddii kale, riix batoonka "+" dedeg aad foder file oo iyaga soo dhoofsadaan.
Talooyin: Haddii aad rabto in aad abaabule shaqsi qaybaha clips style kala duwan, waxaad samayn kartaa koobab ka badan adigoo gujinaya ah "Add horyaal" button. Ka dib markii in, jiidi clip aad doonayso inaad galay horyaalka cusub.
2 files Edit Panasonic (optional)
Muuqaal kale oo ka mid ah tan Panasonic DVD gubi waa in ay siisaa hawlaha tafatirka haboon kaas oo awood kuu inay taabtaan ilaa saarka DVD video ku haboon. Muujinta clip ah oo guji icon qalin, waxaad u timid doonaa in suuqa kala edit ah. Halkan, ku dhowaad dhammaan itusi badan waxay kala yihiin anfacaya, oo ay ku jiraan qoqobada, falinjeeerka, lana siii, qabsato video saamayn, isagoo intaa ku daray watermark ama subtitles.
Waayo, files slideshow photo, aad qabsato karaa qoraalka, guurka, music asalka uu furmo suuqa edit slideshow ah. Fiiro Gaar ah: oo dhan hagaajin ee suuqa kala-waqtiga dhabta ah eegis lagu xukumi karaa.
3 Start Panasonic DVD gubashadii
Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u dhoofiyaan aad Panasonic videos in DVD. Riix ah "Guba" tab si ay u helaan suuqa kala gubatay, oo markaas dhigay drive ka gubanaya, heerka TV, iwm ka dib, gelin ah DVD-R ama DVD + R disc oo ka dhacay Guba si tanuna ha Panasonic DVD gubi is ogow of the inta kale.
Talooyinka gubanaya DVD video Panasonic:
Ka hor inta aadan gubi Panasonic video inay DVD, waa inaad marka hore in computer wareejiyo footages aad duubay. Haddii aad qabto dhibaato ku saabsan in, fadlan eeg this article: Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka fiidiyo ugu Computer .
Tani software gubanaya Panasonic DVD si toos ah dari doonaa DVD menu default si ay u abuuraan aad DVD disc. Si aad uga dhigto more personlized, waxa kale oo aad ka qaadan kartaa mid aad jeceshahay ka badan 50 Hababka template oo dheeraad ah u astaysto. Sida xaqiiqada ah, "menu No" ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa si aad u dalbato.
Si loo hubiyo in disc DVD wax soo saarka ciyaara kaamil ah oo ku saabsan DVD ciyaaryahan aad, waxaa dhaanta inay doortaan disk DVD in qaybiyay si DVD ciyaaryahan aad ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in kaliya dooran caadi ah DVD-R, sababtoo ah waa mid aad u la jaan ugu ciyaartoyda DVD joogto ah heli karo maanta.
Taasi waa! Isku day inaad tan Panasonic DVD gubi si ay u abuuraan DVD guriga aad hadda!